Dhamaan xulashooyinka lagu daawan karo kubada cagta sanadkan | Wararka IPhone
Dhammaan xulashooyinka lagu daawan karo kubbadda cagta sannadkan
Alex vincent | | Waqtiyada firaaqada
Horyaalada Yurub ayaa bilaabay inay soo rogaan xilli ciyaareedkan 16/17 iyaga oo iyaga la jira, shaki ayaa soo laabtay qaar badan oo ka mid ah sida ama halka ay ku arki karaan kooxdooda sannadkan iyo dhammaan tartamada ay ciyaarayso. Ka dib musiibooyinkii sanadkii hore, iibsiga BeIN ee xuquuqda Champions, Movistar ma uusan dooneynin inuu u soo bandhigo isticmaaleyaasheeda Champions League ilaa iyo ka dib wareega group-ka sababo la xiriira shuruudaha laga codsaday inay ku daraan kanaallada kala duwan ee BeIN ee Movistar +, dagaalladii u dhexeeyey saddexda waaweyn (Movistar, Vodafone iyo Orange) ee lagu bixinayo La Liga BBVA, waanu kuu sheegi doonaa Dhamaan fursadaha waxaan sanadkan u heynaa inaan ku raaxeysano isboortiga quruxda badan ee dalkeenna ka socda.
1 Xuquuqda Telefishanka
2 Eeg Kubadda Cagta, Laakiin khadka tooska ah
3 Kubadda cagta kula shaqee
BeIN waxay umuuqataa inay si aad ah uguxirantahay kubada cagta iyo sanadkaan ilaaliyaa xuquuqda ee hadda loo yaqaan 'La Liga Santander' (qeybta koowaad ee Isbaanishka, oo hadda maalgelisa Santander oo aan ahayn BBVA) iyo Liga 1,2,3 (qeybta labaad). Si kastaba ha noqotee, Movistar wuxuu hayaa xuquuqda «Partidazo», baahinta ciyaarta koowaad iyo tan labaad ee uu maalin walba doorto. Intaa waxaa sii dheer, ciyaarta bilaashka ah ee sanadkaan waxay ku jiri doontaa kanaalka GOL oo si bilaash ah uga sii deynaya DTT. Isku soo wada duuboo, waxaan heleynaa kanaalada soo socda ee diyaar u ah inaan ka daawano horyaalada Spain:
BeIN LaLiga: Iyada oo loo marayo kanaalada BeIn waxaan awoodi doonnaa inaan daawano kulamada Santander League marka laga reebo kan hawada lagu sii daayo iyo midka uu doortay Movistar inuu yahay «Partidazo».
Movistar kulan weyn: wuxuu baahin doonaa ciyaarta maalinta ay doorteen movistar labadaba kan koowaad iyo kan labaad (waxaa loo maleynayaa in kooxaha Madrid-Barça classics lagu soo bandhigi doono halkan, Betis-Sevilla, R.Sociedad- Ath.Bilbao, Madrid-Atlético derbies, iwm).
Gol: halkaas oo aan ku arki karno ciyaarta furan toddobaad kasta oo ay ku jiri doonaan kooxo aan ka ciyaareynin tartamada Yurub.
Dhanka tartamada yurub iyo horyaalada kale, panorama xoogaa wey ka duwan tahay waxa aan ku heysano horyaalada Spain. Sida had iyo jeer ah, waxaan daawan karnaa kulan furan Champions League Talaadada, waxaa jira fursad lagu daawan karo Premier League, Bundesliga, Serie A iyo Ligue 1 laakiin xaaladdan xuquuqdu way sii qaybsan tahay, sidaasna uga tagaya qaybinta mid kasta:
Antena 3: waxay dib u baahin doontaa ciyaarta Talaadada ee Champions League oo lagu furi doono barnaamijkeeda "Champions Territory" marka lagu daro inay awood u yeelan karto inay soo gudbiso soo koobida kulamada inta ka harsan marba marka maalinta la gaaro.
BeIN Sports: Champions League oo dhan waa la bixiyaa sanadkan, marka laga reebo ciyaarta tooska ah iyo UEFA Europa League, oo sanadkan noqon doonta bilaa lacag la’aan baahinta. Waxaa sidoo kale kasoo muuqan doona Horyaalka Talyaaniga ama Horyaalka Faransiiska 1.
Kubadda Cagta Movistar: Gaar ahaanta waxaa lagu bixiyaa heerka wadaha, kaliya maahan Premier League iyo kan kale ee Bundesliga. Shaki la'aan waa hanti fiican oo Movistar ka doorbiday sanadkan iyadoo xiisaha Premier League mudnaanta la siinayo.
Eeg Kubadda Cagta, Laakiin khadka tooska ah
Dhowr xilli ciyaareed ka hor, waxaa caado noqotay ikhtiyaar u lahaanshaha daawashada kubbadda cagta adigoon qandaraas toos ula qorin hawl wadeen iyo ikhtiyaar qandaraas qandaraas ah oo aad ku daawan karto ciyaaraha internetka.
Mid ka mid ah xulashooyinka ayaa ah Ku Xidhnow, kaas oo dhammaan kanaalka BeIN lagu bixiyo qeexitaan sare oo aad la arki karto Horyaalka Santander, League 1,2,3, BeIN Sports iyo Gol. Oo ay ku jiraan dhammaan barnaamijyada ay ka baxaan kanaalladaan iyada oo aan wax xaddidaad ah la saarin. Qiimuhu waa .9,99 XNUMX bishiiba iyada oo aan waarin.
teddy tv Waa ikhtiyaarka kale ee lagu daawan karo kubbadda cagta khadka tooska ah. Tedi TV wuxuu ikhtiyaar u leeyahay inuu shaqaaleeyo kanaalada aad rabto inaad ku daawato qaab shaqsi ahaaneed oo sidaas darteed, waxaad adigu hagaajin kartaa qiimaha intaa ka badan (Laakiin inaad aragto wax la mid ah sida BeIN Connect ayaa ka qaalisan). Si kastaba ha noqotee, waxay u oggolaaneysaa shaqaaleynta Movistar Partidazo, ikhtiyaar aysan BeIN Connect lahayn. Qiimaha uu doorsoomahan isbedelku ku adeegsado internetka waa: .9,95 1,2,3 si aad u awoodo inaad daawato BeIN LaLiga oo aad aragto Horyaalka Santander iyo kan 4,95; € 9,95 oo loogu talagalay Movistar Partidazo iyo .XNUMX XNUMX oo loogu talagalay BeIN Sports.
Waxaad ka soo dejisan kartaa codsiyada labada ikhtiyaar ee khadka tooska ah qalabkaaga macruufka halkan:
Codsiga mar dambe lagama heli karo App Store Codsiga mar dambe lagama heli karo App Store
Kubadda cagta kula shaqee
Shaki la'aan, ikhtiyaarka uu qof walba u adeegsado waa inuu qandaraas la galo wadahaaga, si kastaba ha noqotee, halkan xulashooyinka waa la badiyo maxaa yeelay hawl wade kasta wuxuu leeyahay dalabyo iyo xirmo dalab kasta. Waxaan ku kala qaybin doonaa hawl wadeenka si loo fududeeyo.
Movistar wuxuu na siiyaa xirmooyin dhowr ah oo ay ku jiraan kubbadda cagta. Dhammaantood waxay leeyihiin suurtogalnimada inay ku daawadaan khadka tooska ah ee adeegyadooda Yomvi, laakiin kaliya kanaallada ayaa qandaraas la qaatay xirmada. Xirmooyinkaani waxay leeyihiin isdhexgalka mobilada + xogta + internetka (fiber ama ADSL), marka kamahadleyno xirmooyin gaar ah oo lagu daawado kubada cagta laakiin waa xirmo. Waxaan haynaa xulashooyinka soo socda:
Isku-darka + 30: xirmada Movistar ee ugu raqiisan taas oo ay ku jiraan kanaalka BeIN si ay u awoodaan inay arkaan kaliya Santander League, 1,2,3 League iyo Copa del Rey. Haddii waxa kaliya ee adiga ku xiiseynaya uu yahay horyaalka Isbaanishka, tani waa xirmadaada Movistar. Laakiin taxaddar, kuma jirto Movistar Partidazo, markaa ma awoodi doontid inaad aragto ciyaarta aadka u wanaagsan ee toddobaad kasta. Waxa kale oo ku jira khad mobile ah oo leh 3GB, wicitaano aan xadidnayn iyo 30 Mb Fiber. Qiimaha waa € 70.
Isku-darka + 300: Xirmooyinkaan, marka lagu daro inaad awood u leedahay inaad aragto horyaalada Isbaanishka marka laga reebo ciyaarta la soo bandhigay ee laga sii daayay Movistar Partidazo, waxaad awoodi doontaa inaad aragto dhammaan barnaamijyada Yurub ee ay bixiso BeIN Sports. Qiimaha waa € 85 oo leh khad taleefan oo 3GB ah, wicitaanno aan xadidnayn iyo 300 Mb oo isku dheelitiran Fiber.
Isku-darka + 2: xirmadaan waxaan waxaa ku jira dhamaan kubada cagta. La Liga, Copa del Rey, Champions, UEFA Europa League, Premier League, Bundesliga, Eredivise, Serie A, Ligue 1 ... Waxay leedahay dhammaan kanaallada BeIN, Movistar Partidazo iyo Movistar Fútbol. Ma seegi doono hal ciyaar oo leh xulashadan. Qiimaha waa € 110 oo leh 300 Mb oo feyl isku dhejisan, laba khadad oo moobayl ah oo wata 3 GB iyo wicitaanno aan xad lahayn.
Sidoo kale, haddii aad horeyba u ahayd macaamiil Movistar, waxaad bilaabi kartaa inaad aragto dhammaan barnaamijyada aad qandaraaska ku qaadatay Yomvi:
Vodafone waxay leedahay dalabkii ugu darnaa intaan Sebtember bilaabmin. Waxay bixisaa dhamaan kubada cagta for 6 bishiiba hadaad kireysato kahor 31/08 ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka. Xayeysiintan waxaa ka mid ah horyaalada Isbaanishka, Copa del Rey, Champions, UEFA Europa League, Ligue 1, Serie A ... dhammaan barnaamijyada lagu soo daray kanaallada BeIN Sports, BeIN LaLiga, Movistar Partidazo. Cdalabkan waxaan seegi doonnaa kaliya Premier League iyo Bundesliga.
Xirmada Kubadda Cagta: Si qandaraas loogu siiyo kubbadda cagta € 6, waxaa lagama maarmaan ah in qandaraas lagaliyo Vodafone oo ay ku jiraan Fiber, moobiil (xog + wicitaano) iyo telefishan. Xirmada aasaasiga ah waxay ku socotaa € 46 oo ay kujiraan kubbadda cagta, 120Mb oo faybar ah oo ka socda ONO, 1 khad mobile ah oo 2GB ah iyo 200 oo daqiiqo oo wicitaanno ah wayna kala duwanaan karaan ilaa € 125 Waxay kuxirantahay qaabeynta aad ubaahantahay, isku darka TV + Fibre + Xogta kujirta mobilka + tirada khadadka.
Vodafone waxay leedahay suurtogalnimada in laga daawado dhammaan barnaamijyada qandaraaska leh iyo iyada, kubbadda cagta iyada oo loo marayo barnaamijkeeda Vodafone TV:
Orange waxay leedahay dalabyo dhowr ah oo ah fiber + khadadka mobilada oo baakadaha telefishanka ee la xushay lagu dari karo, xaaladdan oo kale kuwa kubadda cagta. Waxyaabaha ugu waaweyn ee ay bixiso Orange waa:
Qoyska Kangaroo: dalabkan waxaa ka mid ah 300 Mb oo fiber ah oo isku dhejisan ama 50Mb oo lagu daray 10 GB oo xog ah oo loogu talagalay labada sadar ee mobilada ay ku jirto. Qiimaha hadda waa € 39,98 3-da bilood ee hore iyo .91,95 9,95 laga bilaabo bisha afraad. Tan waa in lagu daro xirmada Orange TV Soccer, oo ay ku jiraan BeIN LaLiga si aad u daawato qaybta koowaad iyo labaad, Movistar Partidazo iyo dhamaan Copa del Rey qiimo dhan € 5 bishii iyo haddii aad sidoo kale rabto inaad aragto kooxda heysata horyaalka, XNUMX Bishiiba kaliya loogu talagalay BeIN Sports oo ay kujiraan Champions iyo UEFA Europa League. Joogitaanka a Qiimaha € 54,93 saddexda bilood ee hore iyo € 106,9 bishiiba (qiimaha leh 50Mb oo aan ahayn 300, waxaa laga dhimay bishii 4aad ilaa 94,9).
Kangaroo Unlimited: oo ay ku jiraan 300 Mb oo feyl isku dhegan ama 50Mb, khadka taleefanka gacanta oo leh 4 GB iyo wicitaanno aan xadidnayn oo ah .29,48 3 70,95da bilood ee ugu horreysa iyo € 58,95 laga bilaabo bisha afraad (ama 50 haddii la qaato 9,95Mb). Ku darista 5 iyo XNUMX ee kubada cagta sidii kiiskii hore, waxay noqon laheyd .44,43 XNUMX saddexda bilood ee hore iyo 85,9 laga bilaabo bisha 4aad.
Keydka Kangaroo: Dalabka ugu jaban ee Orange, oo leh 300 ama 50 Mb oo feyl isku mid ah, hal khad taleefan oo wata 2GB iyo 200 daqiiqo oo wicitaanno ah, waxaan ku heli lahayn qiime ugu dambeeya kubbadda cagta .38,43 XNUMX bishiiba saddexda ugu horeysa iyo 73,9 kii afraad.
Dabcan, Orange sidoo kale waxay leedahay suurtagalnimada inaad ku daawato barnaamijkeeda internetka barnaamijkeeda aad ka heli karto halkan:
Sida aad arki karto, Movistar + oo leh Fusion + 2 ayaa ah kaliya xulasho ay ku jiraan kubbadda cagta oo dhan Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray oo ahaa reer Yurub sannadkan, si kastaba ha noqotee, qiimaha saddexda shirkadood ee waaweyn ee leh dalabkooda ugu fiican ayaa si aad ah isugu eg.
Marka waxaan leenahay Panorama telefishanka si aan u awoodno inaan aragno dhammaan kubadda cagta sanadkan. Hadda waxaa hadhsan oo keliya in la doorto ikhtiyaarka sida ugu habboon ugu habboon baahiyaha iyo dookhyada mid kasta oo kara kara ku raaxeyso hal sano oo dheeri ah isboortiga heer sare ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Waqtiyada firaaqada » Dhammaan xulashooyinka lagu daawan karo kubbadda cagta sannadkan
aad u wanaagsan post macluumaad. Mahadsanid
Ku jawaab diego t
Fitbit Charge 2 iyo Fitbit Flex 2 ayaa la sifeeyey
Frank Ocean wuxuu sii daayaa albumkiisa muuqaalka ah oo u gaar ah Apple Music